Qarax bambaano ayaa lala beegsaday bas booliis koonfurta dalka Turkiga – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA Qarax bambaano ayaa lala beegsaday bas booliis koonfurta dalka Turkiga
Qarax bambaano ayaa lala beegsaday bas booliis koonfurta dalka Turkiga
Bambo wadada dhinaceeda la dhigay ayaa lala beegsaday bas booliis koonfurta magaalada Adana ee Koonfurta dalka Turkiga, halkaas oo ay ku dhaawacmeen shan qof.
Qaraxa, ayaa ka dhacay degmada Yuregir, wuxuu ahaa mid ka yimid “aaladda walxaha qarxa ee laga sameeyay ama nooc kale oo bam ah,” ayuu yiri gudoomiyaha Adana Mahmut Demirtas oo lahadlay wakaalada wararka Anadolu Arbacadii.
Mid ka mid ah dadka dhaawacmay wuxuu ahaa sarkaal boolis ah, ayuu yiri Demitras, isagoo intaas ku daray in afarta qof ee kale ee dhaawacmay ay ahaayeen kuwo jidka marayay.
“Kuwa dhaawacmay waxay ku jiraan xaalad aad u wanaagsan. Muwaadiniintu waxay u tageen cusbitaalka si feejignaan leh. Ma jiraan wax arrimo ah oo ku saabsan booliskeenna, ”ayuu Demirtas ku yiri hadal uu soo dhigay boggeeda internetka.
Warbaahinta Turkiga ayaa muujisay bas si xun u burburay oo ay hareereeyeen qashin burburin iyo baabuurta kale ee waxyeeloobay biriij dadka maraan hoostiisa degmada Yuregir.
Booliis hubaysan ayaa xidhay aagga waxaana la bilaabay baadhitaan ku saabsan weerarka.
Ma jirin sheegasho deg deg ah oo masuuliyadeed.
Turkiga waxaa horay uga dhacay qaraxyo xiriir ah oo hore ay u fuliyeen kooxaha Daesh iyo kooxaha xagjirka ah ee Kurdiyiinta (PKK).
Previous articleTrump: Dagaal ma Dooneyn
Next articleWasiir Sadiiq Warfaa oo la kulmay RW Qatar